बुद्ध एयरको त्यो घटना, नियामकलाई किन लाग्यो सामान्य ? - ParyatanBazar.com
बुद्ध एयरको त्यो घटना, नियामकलाई किन लाग्यो सामान्य ?
पर्यटन बजार७ पुष २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित
पुस ७ , काठमाडौं । एक ठाउँमा जानुपर्ने जहाज अर्को ठाउँ पुग्यो भने त्यसलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । तर, हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले यो विषयलाई अति सामान्य र हल्का रुपमा लिएको पाइएको छ ।
यो क्षेत्रका विज्ञका अनुसार यदि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा यस्तो घट्ना भए, त्यसलाई दुर्घटनासरह लिइन्छ । सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । तर, नेपालमा नियामक निकायले यसलाई अति सामान्य रुपमा लिएर बुद्ध एयरको शुक्रबारको घटनालाई सामसुम बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
बुद्ध एयर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स हो । त्यही बुद्ध एयरले यसअघि पनि यस्तो घट्ना घटाइसकेको छ । यो उसका लागि दोस्रो हो । यसअघि काठमाडौंबाट विराटनगर जानुपर्ने जहाजलाई भैरहवा पुर्याइएको थियो ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट आफूलाई अब्बल कित्तामा उभ्याएको बुद्धबाट यतिसम्मको लापरबाही हुँदासम्म नियामकले आँखा चिम्लिनुको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
नियामकले के भएको हो ? भनेर अहिलेसम्म एउटा छानविन समेत बनाएर अध्ययन गर्न समेत आवश्यक ठानेन् । बरु बुद्ध एयर आफैले यस विषयलाई लिएर अध्ययन गर्ने बताइसकेको छ । जबकि, बुद्धलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दा समेत नियामकलाई नलाग्नु उदेकलाग्दो अवस्था हो ।
शुक्रबार भएको घटनालाई लिएर एयरलाइन्सले छानविन समिति बनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कसको दोष हो र कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी गराइएको छैन ।
यो विषयमा छानविन गर्न अहिलेसम्म समिति गठन नभएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । ‘पहिला बुद्धको रिपोर्ट पर्खिएर बसेका छौं,’ महानिर्देशक पोखरेलले क्यापिटल नेपालसंग भने ‘रिपोर्टका आधारमा कसरी अगाडी बढ्ने विषयमा छलफल गर्ने र्छौ ।’
प्राधिकरणमा पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाले मिति ठ्याक्कै थाहा नभए पनि घटना यसअघि पनि भएको बताए । उनले अहिले भएको घटना सुरक्षाको हिसावले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यसलाई गम्भीर रुपमा सबै एयरलाइन्स र प्राधिकरणले लिनु पर्ने बताए ।
तर, बहालवाला महानिर्देशक पोखरेललाई त्यति गम्भीर नलागेको उनको भनाइबाट पुष्टि भइसकेको छ । एक दशकअघि पनि पाइलटहरु बीचको विवादका कारण विराटनगर उडेको जहाज भैरहवामा अवतरण गरिएको थियो ।
जनकपुरका यात्रुहरु पोखरा पुग्ने जहाजको नेतृत्व क्याप्टेन रीता प्याकुरेल, को–पाइलट सुरेश कटवालले गरेका थिए । विराटनगर पुगेर फर्किएको सो जहाजको जानु पर्ने गन्तव्य भने पोखरा नै थियो । त्यही भएर क्याप्टेनलाई आफू पोखरानै जाने हो भनेर गएको श्रोतको दाबी छ ।
शुक्रबार दिउँसो देखिनै तराइका जिल्लाहरुमा मौसम खराबीको कारण उडानहरु डिले भइरहेको थियो । लामो समयसम्म जहाज नउडेको भन्दै जनकपुरका यात्रुहरुले विमानस्थलमा रहेको मार्केटिङ अफिसमा दबाब दिइरहेका थिए ।साँझ पर्न लागिसकेको हुनाले छिटोभन्दा छिटो जनकपुर र पोखरा दुबै गन्तव्य भ्याउनुपर्ने दबाव पाइलटमाथि थियो ।
विराटनगरबाट आएको जहाज पोखराको लागि तयारी अवस्थामा बसिरहेको बेला मार्केटिङ र ग्राउण्डह्याण्डलिङका कर्मचारीहरुको सहमतिमा पहिला जनकपुरमा जहाज पठाउने निर्णय भयो । त्यहीअनुसार टावरमा जानकारी गराईयो र यात्रुहरुलाई जहाजमा चढाइयो ।
कम्यूनिकेशन गर्ने दुई वटा ठाउँ हुन्छ । टावर र ककपीट एउटा भने ग्राण्डह्याण्डलिङका कर्मचारी, क्याविन क्रु र ककपीट हुन्छ । उडान समय पनि पोखरा र जनकपुरको २५/२५ मिनेट नै छ । पोखरा विमानस्थलमा भीएफआर सिस्टम रहेकाले रात्रिकालीन अवतरणको सुविधा छैन भने जनकपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन अवतरणको सुविधा छ ।
त्यहि भएर एयरलाइन्सको पहिलो प्राथमिकता पोखरा रहेको र त्यसपछि मात्र जनकपुरका लागि आधा, एक घण्टा ढिला जहाज उडाउँदा पनि केही फरक नपर्ने निचोडमा पुगेका थिए ।
पहिला भीएफआरमा उडान सकाउनु पर्ने आन्तरिक दबाब थियो । किन की मौसम खराब भयो भने उडान रद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले टावरले ६०७ पोखरा भनेर पाइलटलाई जानकारी गराएको पाइन्छ । पछि ग्राउण्डका स्टाफले जनकपुरको यात्रुहरु राख्यो र बुद्धको टावरसँग कुरा गरेर अवको जहाज जनकपुर जादै छ भनेर जानकारी गराउँदा बुद्धको टावर र ककपीटबीचमा कुरा हुन पाएन ।
ग्राउण्डका कर्मचारीहरुले लोडसिट बनाएर क्याप्टेनलाई हस्ताक्षर गराइन्छ । जहाजभित्र भएका यात्रु र जहाजमा भएको लोडको बारेमा क्याप्टेनले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो जहाज उड्नका लागि योग्य हुन्छ ।
त्यो लोडसिटको माथिल्लो पट्टिको भागमा जहाज जाने ठाउँ प्रष्ट लेखिएको हुन्छ । क्याप्टेनले लोडसिटलाई नहेरी हस्ताक्षर गरेपछि जहाज पोखरा पुगेको बुझिएको छ । क्रु मेम्वरले पटक पटक यात्रुहरुलाई जानकारी गराउँदा हामी जनकपुरको यात्रामा छौं । यति डिग्रिमा हामी रहेका छौं र यो उचाइमा पुगौं भनेर जानकारी गराएकी थिइन ।
जहाज १० हजार फिट नपुग्दासम्म पछाडि बोर्डमा एयरहोस्टेसले गर्ने ब्रिफ तथा यात्रुको हल्ला ककपिटमा सुनिँदैन । पाइलटले पछाडिको संवादले डिस्टर्भ गर्ने भएकाले नसुनिने बनाएका हुन्छन । यसलाई ‘स्टेरायल ककपिट रुल’ भनिन्छ । क्याप्टेनले क्रु मेम्वरले भनेको पनि सुन्न चाहेमा सक्छन् । तर, क्याप्टेनले त्यो पनि गरेकाले शुक्रबारको घटना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।